Tranga voajanahary :: Olona enina tsy hita popoka noho ny rambon-danitra • AoRaha
Nandravarava ny orana sy havandra narahana rambondanitra tany amin’ny kaominina Ankilizato, distrikan’Ampanihy Andrefana, tamin’ny alarobia lasa teo. Ankoatra ny trano tamina fokontany maromaro potika dia fantatra fa olona enina no tsy hita popoka, hatramin’ny omaly. Olona dimy hafa kosa no naratra.
Avy ny orana narahana havandra tany an-tampon-tanànan’Ankilizato, any amin’ny 25 kilaometatra miala an’Ampanihy, tamin’ny tolakandron’ny alarobia 25 marsa lasa teo, nanomboka tamin’ny iray ora tolakandro. Nisy rivotra nifofofofo, avy eo. Naharitra folo minitra teo ho eo ny rivotra. Ny hariva kosa vao nijanona ny orana. Nivoaka nifampanontany ny zava-nisy sy nijery teo amin’ny manodidina ny mponina. Nisy ny trano rava. Simba ny voly teny antanimboly.
“Andrasana ny tatitra mazava avy amin’ny lehiben’ ny fokontany tratran’io tranga voajanahary io. Nisy ny birao sy toeram-pitsaboana, sekoly, fiangonana ary tranon’olontsotra rava. Naratra nianjeran’ny trano kosa ny olona dimy. Manodidina ny zato eo ireo tra-boina, araka ny tatitra voaray farany. Ao amin’ny tranom-panjakana mbola azo ialofana no ametrahana azy ireo, amin’izao fotoana izao. Efa niantso sy nifampiresaka tamin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Birao nasionaly misahana ny loza voajanahary (BNGRC) izahay”, hoy i Tsaradia Marco, solombavambahoaka any Ampanihy Andrefana, tamin’ny antso antelefaonina, omaly.
Manamorona renirano ity tanàna niharam-boina ity. Niakatra ny rano, tamin’ny fotoana nisehoan’ny loza. Tsy hita, tamin’io andro io, ny olona miisa iraika ambin’ny folo, araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Efa hita ny efatra tamin’izy ireo raha mbola karohana ny enina ambiny.
Tifitra teny Antsahabe :: Nitsoaka any Toliara ireo namono an’ilay mpitondra môtô
Morondava :: Mpitandro filaminana voatondraka maloto